guta : Seuol
Musakanganwa kuti discuss Yonsei University
Yonsei University akazarura musuo ano dzidzo pamusoro mumwe adarika. It Kubvira ipapo yakabuda sezvo oga yunivhesiti rwacho pamusoro uye pokutanga pakati zvikuru nomukurumbira mumayunivhesiti zvenyika. Kuvaka pamusoro nhoroondo yedu uye tsika, Yonsei huchatungamirira kudzingirira ramangwana itsva. Achitsvaka nzvimbo yedu chakarondedzera civilizational yokuchinja, Yonsei achatungamirira inotevera 100 makore kunyora nhoroondo itsva.
Yonsei University vava kupinda munyika kumbofungidzirwa yaaizova. In dutu remhepo hombe transformations, kukurumidza kukura pakukurukurirana uye michina kwesayenzi zvikurukuru vari reshaping yunivhesiti kudzidzisa uye tsvakurudzo zvakatipoteredza zvachose. Nokudiwa ari kumuka kuti itsva dzidzo muenzaniso kuti anotsigira chizvarwa kutarisirwa kurarama kuva 100 zera. saka, Yonsei University ari nekushandura tsvakurudzo wayo, dzidzo hurongwa, uye kutsigira Kutarisirwa kuti kutungamirira nzira pakutsvakurudza mberi-mafungiro uye dzidzo kuti kuchinja vanhu.
Kungotaura kupa zvikuru unyanzvi ruzivo, sezvo aiva tsika muindasitiri nzanga kare, kwaizova zvino kuva kuzvibvisa pana vadzidzi vachaona pakona zana idzva. Kunyange munguva umo chakagadzirwa njere runopfuura dzevanhu mumurangariro kugona, Yonsei achapindura kudaidzwa pave unyanzvi zvakasikwa chete anogona kuitwa nevanhu. Yonsei ari kugadzira zvirongwa siyana kuti pave okugadzira zvinhu munyika "zvakarukwa nzanga." Mazuva ano yaitonga, kuramba aiita akasiyana nzvimbo ruzivo uye unyanzvi kuvaka network kuti kupa nzira zvachose matsva siyana zivo uye maonero.
Semuyenzaniso, yefizikisi chaanotizivisa dzidziso uye michina unyanzvi Nanotechnology vari kutyora zvipingamupinyi pakati yakaisvonaka sayenzi uye vakashandisa zvigadzirwa. Pamwe pakati nevanhu uye sayenzi dzinongoitika kwakaunzwa zvakagadzirwa dzakanga dzisina kumbofungwa nezvadzo. Saka zvinokosha kuti madhipatimendi uchitevedzera anokamura uye dzinokurudzira nhaurirano pakati vaongorori vedzimwe minda. Kwaizvozvi, Ndinotenda kukosha pakugonesa "extelligence,"Kuvandudzika yenjere kuburikidza panaakabatanidzwa pamwechete repfungwa zvimwewo nokuparadzaniswa yakajeka. Okugadzira zvinhu harisi kukwanisa kugadzira dzisingaiti chinobatika, asi ndiko kugona kutora chii kare uye kuita chinhu chitsva kuburikidza mumurangariro network.
Mune remangwana, urombo uye nokugoverana achava sezvinoita kunokosha sezvo rokusika pfungwa. Yonsei achadzinga kuedza kugadzirisa chimwe "tsitsi vanhu" akadaro nokumutsa vatungamiriri vanoita kugoverana. Nokuti nzanga iri ramangwana, kutsvaka pachavo unozvininipisa kuchatsiviwa kuremekedzana uye nokugoverana mufaro uye nekusuwa nevamwe; nzanga achabviswa kubva yaro "zvakasimba ndizvo chete zvinorarama" mafungiro uye kutarira kurutivi yokuzviratidza, uye individualism ndichatambanudzira kuti collectivism. The havaoni pamusoro Yonsei akadyara kukosha mukupfuura kungoti kugoverana zvinhu zvedu uye zvinogonekwa nokuudza utungamiri. Challenge uye zvisikwa, kutaurirana uye tsitsi, kugoverana uye nehanya, uranda uye kuremekedza. Ndivo tsika kuti isu takura nesu sevatungamiriri ramangwana, uye Acharwa uye kutsigira sezvo Yonseians. Join pamwe Yonsei mukutungamirira inoenda ramangwana.
Graduate School Curse
Unoda discuss Yonsei University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo